पानी कसरी पिउने ? – HamroKatha
सधैँ पानी बसेर पिउनुहोस् । कहिल्यै पानी पानी हिँड्दै या उठेर नपिउनुहोस् । यसो गर्दा शरीरमा पानी तीव्र गतिले प्रवेश गर्दछ । साथै धेरै मात्रामा ग्यास पनि हाम्रो शरीर भित्र पानीले लिएर जान्छ । साथै त्यसो गर्नाले हाम्रा आन्द्राहरूमा तीव्र घर्षण गराउँछ ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ २३ गते १६:४५
तस्वीर: Popular Science
जब हामी जन्मन्छौ, शिशु अवस्था हाम्रो शरीरको ७५ प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ। तर बढ्दो उमेरका साथ उक्त पानीको मात्रा क्रमिक रूपले घट्दै जान्छ। जब हामी वयस्क हुन्छौ तब एक सामान्य पुरुषको शरीरमा ६० प्रतिशन पानी रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी एक वयस्क महिलाको शरीरमा ५५ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । आखिर यती धेरै पानी हाम्रो शरीरमा कहाँ हुन्छ त ? पानीको केही मात्रा हाम्रो मृगौला र कलेजोमा रहेको हुन्छ I केही मात्रमा हाम्रो पेट, मूत्रथैलीमा र मेरुदण्डमा जम्मा भएको हुन्छ । हाम्रो मुटु र मस्तिष्कको ७५% भाग पानीले बनेको हुन्छ । हाम्रो फोक्सोमा करिब ८३ प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ । तर पुरै शरीरमा सबैभन्दा धेरै पानी हाम्रा कोषहरूमा रहेको हुन्छ ।
विश्वास नलाग्ला; हाम्रो शरीरको हड्डी जो पूर्णरुपले सुख्खा देखिन्छ त्यसको भित्र पानी ३१ प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ । यस प्रकारले हेर्ने हो भने हाम्रो शरीरका सबै अङ्गले पूर्ण रूपमा काम गर्न पानीको मात्र पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसै कारणले गर्दा एउटा व्यक्ति खाना नखाए पनि धेरै दिनसम्म जीवित रहन सक्ला तर पानी बिना धेरै दिन जीवीत रहन सक्दैन । पानी हाम्रो शरीरका निम्ति यति धेरै आवश्यक रहेको हुनाले यो सँग जोड्दिएका नियमको पालना गर्न एकदमै आवश्यक छ । किनकि पानी पिउने तरिका, पानी पिउने समय तथा पानी पिउने मात्राले हाम्रो शरीरलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारको असर पर्ने हुन्छ । हामीले दैनिक रूपमा कति पानी पिउनु आवश्यक छ ? कस्तो प्रकारको पानी पिउनु आवश्यक छ ? कुन समयमा पानी पिउनु आवश्यक छ ? हामीलाई यी सबै कुराको जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ । किनकि पानी सँगको लापरवाहीका कारण हाम्रो शरीरलाई एकदमै नोक्सान पुग्न सक्छ ।
१) जोर्नीको दुखाइ
२) कब्जियतको समस्या
३) माइग्रेनको समस्या
४) छाला तथा गालामा आउने दाग, धब्बा तथा डनडिफोर (पिम्पल्स)
५) कपाल झर्ने तथा किड्नी सँग सम्बन्धित समस्या
६) पेट तथा पाचन प्रक्रिया सँग सम्बन्धित समस्या / ग्याष्ट्रिकको समस्या
७) खाना राम्रो सँग नपच्ने / मोटो पनको समस्या
८) शरीर कमजोर हुने तथा अल्छीपन बढ्ने
९) राती राम्रो सँग निन्द्रा नलाग्ने
१०) छालामा सुख्खापन तथा अन्य छाला सम्बन्धित समस्या आदि ।
हाम्रो शरीरमा हुने करिब ४०% भन्दा बढी प्रकारका बिरामी पानी सँग नै सम्बन्धित रहने गर्दछन् । आजको व्यस्त समयमा हामी जानी या नजानी पानी पिउदा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा गल्ती गरी रहेका हुन्छौ । जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा कहिल्यै निको नभएका रोग या समस्याको कारण पत्तो समेत हामीले पाएका हुँदैनौ । जो मानिस सही तरिका पानी पिउने बानी बसाल्छ उ हरेक मौसममा स्वस्थ र निरोगी रहन्छ ।
लामो समयसम्म आँखा, हड्डी, छाला र कपाल स्वस्थ रहि रहन्छ । पानी पिउने तरिका परिवर्तन गर्नाले मात्र हाम्रा केही प्रकारका रोग हराउछन् या ठिक हुन्छन् ।
कसरी र कति मात्रा मा पानी पिउने त ?
१) हरेक मानिसको शरीरको आकार, तौल तथा शारीरिक क्रियाकलाप अनुसार दिनमा कति पानी पिउने भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्छ । हाम्रो दैनिक रूपमा दिशा ,पिसाब ,पसिना तथा बोल्ने र सास फेर्ने प्रक्रियाबाट पानी बाफको रूपमा शरीर बाहिर गहिरहेको हुन्छ ।
२) बिहान वा बेलुका तपाईँ शारीरिक परिश्रम गर्नु हुन्छ भने पानीको मात्रा बढाईदिनुहोस । अधिक पानी हाम्रो शरीरको छालाको लागि त फाइदा जनक छ । तर आवश्यकता भन्दा बढी पानीको मात्रा हाम्रो किड्नीको निम्ति हानिकारक छ ।
३) पिसाबको रङ्गबाट हाम्रो शरीरको पानीको मात्र बुझ्न सकिन्छ । यदि तपाइको पिसाबको रङ्ग पहेँलो छ भने तपाईँको शरीर डिहाइड्रेटेड छ । तपाइको शरीरलाई पानीको आवश्यकता छ । यदि तपाइको पिसाब पानी जस्तै सफा छ भने यसले तपाइको शरीर पूर्ण रूपमा हाइड्रेटेड छ । अथवा तपाइको शरीर पानीको मात्रा पर्याप्त छ ।
४) बिहान चिया, कफी पिउनु पहिले १ वा २ ग्लास पानी पिउने बानी बसाल्नुहोस्। जसले गर्दा हाम्रा आन्द्रा र पेटको राम्रो सफाई हुन्छ ।
५) दिउसो हिँड-डुल गर्नु हुन्छ या शारीरिक परिश्रम गर्नु हुन्छ भने कामको बिच-बिचमा आधा-आधा ग्लास पानी पिउने बानी बसाल्नुहोस्।
६) कहिल्यै पानी; खाना खाने बित्तिकै या खानु पहिले नपिउनु होस् । जसले गर्दा हामीले खाने खाना पाताल्लिन्छ र राम्ररी खाना पच्न पाउँदैन ।
७) चिया वा काफी पिए लगतै चिसो पानी नपिउनु होस् । यसो गर्नाले हाम्रो घाटी तथा स्वर प्रक्रियामा असर पर्न जान्छ ।
८) चीसो या अधिक मात्रामा पानी पाइने खर्बुजा जस्ता फलफुल खाने बित्तिकै पनि पानी नपिउनुहोस । यसो गर्नाले उक्त फलफुल राम्ररी पच्न पाउँदैन र रुघा-खोकी जस्ता समस्या आउन सक्छ्न ।
९) पानी पिउँदा पानीलाई केही समय मुखमा खेलाएर पिउने गर्नुहोस् । कहिल्यै पनि एकै समय धेरै पानी नपिउनु होस्, साथै हतार्रिएर पनि पानी नपिउनुहोस । किनकि हाम्रो शरीरमा एक चोटि एक ग्लास अथवा २५० एम.एल पानी पचाउने क्षमता हुन्छ ।
१०) सधैँ पानी बसेर पिउनुहोस् । कहिल्यै पानी पानी हिँड्दै या उठेर नपिउनुहोस् । यसो गर्दा शरीरमा पानी तीव्र गतिले प्रवेश गर्दछ । साथै धेरै मात्रामा ग्यास पनि हाम्रो शरीर भित्र पानीले लिएर जान्छ । साथै त्यसो गर्नाले हाम्रा आन्द्राहरूमा तीव्र घर्षण गराउँछ ।
लेखन : ईश्वर लुईटेल